Laser ukusika achine inkqubo yolawulo lwamanani
Usebenziso olulula lobuchule
Inkqubo ephezulu yokukrelekrele kunye neyobuchwephesha bokusika amandla okuseta amandla e-fiber.Stable kwaye inokuthenjwa, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukulungisa ingxaki, imveliso ekhuselekileyo, imisebenzi etyebileyo, ukusebenza ngokugqwesileyo kunye nezinye izinto, Ngaba okwangoku zi-laser ezinikezele kakhulu kwimarike inkqubo yokusika.
Ulawulo lwemveliso ngokulula
Ukuqhubekeka kunye nokuzoba kwahlulwe ukuqinisekisa ukuzinza okuzinzileyo kwezixhobo zokuqhubekeka, kunye nenkxaso yokutyhala kwenethiwekhi ekude kunye nokulawulwa kwemisebenzi yokuqhubekeka; Nika isitshixo esinye sokulinganisa, ulungelelwaniso lwe-laser, ukutshintshwa kombhobho, ukucoca umlomo kunye nezinye iinkqubo ezizenzekelayo zezixhobo zokukhawulezisa nezikhuselekileyo; Ukuqonda ukuzala ngokukhuselekileyo nokuguquguqukayo kuyilo ngokubonwa nguGawulayo;
Ukubeka iliso kunye nokurekhodisha imeko yezixhobo kunye nolwazi. Nikezela ngeenkqubo zovavanyo ezizenzekelayo zokuqhuba ukusombulula ingxaki okude nokukhawulezayo;
Nokwandisa amandla okusebenza ngokulandela imodeli ukufezekisa ukufikelela okukhuselekileyo ekusebenzeni kweplate kunye nokulandela okulandelayo;
Ukuqokelela idatha yokusetyenziswa kwezinto zezixhobo, kwaye ukhumbuze abathengi ngengqondo ukugcina izixhobo ngokufanelekileyo ukwandisa ubomi benkonzo;
Analzye ubudlelwane phakathi machining umkhondo kunye umkhondo idle ngexesha lenene, resonably ukugweba imeko lift of angasebenzi ukusika head.improve ukusebenza machining kunye nokuqinisekisa ukhuseleko ukusika intloko.
Ukubuyela kwakho ngokukhawuleza kutyalo-mali
Ukuchaneka komkhondo yi-0.005mm, ukuchaneka kokubeka indawo yi-0.001mm, kunye nokuchaneka kokubekwa endaweni eyi-0.002mm Maximuim, ukukhawulezisa i-5G, isantya sokusika esiphezulu se-150m / min, isantya esiphezulu sokufuduswa kwe-300m / min
Imodeli yothotho ngokubanzi
Precision sheet metal ukusika kunye nokulungisa le modeli zesiqhelo, igcina iimpawu high-amandla umatshini enzima tools.focus kwi ngqo ngesantya esiphezulu ahlabayo; Ifakwe ngentsimbi yobungcali non-ayoni (copper.aluminum.stainless intsimbi, molybdenum) ukusika data ingcali , Umgangatho ngefayibha laser (amandla ≤6000W), ukukunceda uvune ngokukhawuleza nangokubanzi ...
1.Ndikunika indawo yokusebenza eluhlaza (ebiyelwe ngokupheleleyo)
Ukuzinza 2.Extremely eliphezulu
5.Ukuphinda ukubeka ngokuchanekileyo kokutshintsha kwetafile: ± 0.05mm
I-axis ye-6.XY ine-positioning mechanical, ukugcina ixesha lokufumana icala
I-axis ye-7.X yokudibanisa i-aluminium yokuphosa ifa
Ukuchaneka kwendiza ye-X-axis ye-X kufunyenwe ngenqanaba le-marble flat plate≤0.03mm
Egqithileyo Isando sesando
Okulandelayo: amazinyo okusika
Cnc Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini
Umatshini wokusika oMncinci weLaser